Tag: saamaynta iyo otomatigga | Martech Zone
Tag: saamaynta iyo otomaatiga
Isniin, Oktoobar 6, 2008 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan adeegsanaayey Mashiinka 'Wayback Machine Archive' ee Internetka caawa si aan isugu dayo inaan tilmaamo markii aan si rasmi ah u bilaabay qorista. Waxaan ahaa bloomer soo daahay marka la barbardhigo kuwa wax qora ee blogga bilaabay markii wali loo yaqaan joornaalista. Booggeygii ugu horreeyay wuxuu ka dhacay Ryze oo ay la socdaan koox Suuqgeyn Wargeysyada Wargeysyada ah (Ma hubo in Ryze ay kor u kac sameysay illaa 2005!). Ka dib waxaan u dhaqaaqay Blogger oo waxaan bilaabay qorista Doug's Rant. Boostada ugu horreysa ee la soo dhigo
Mawduuca ol wuxuu bilaabay inuu igu caajiso xoogaa aniga, sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan taxaddar ku tuuro dabaysha oo runtii aan ku kariyo goobta. Waxaan ku bilaabay mawduuca beta ee 'Squible beta' oo gebi ahaanba waan xardhay. Xitaa waxaan ku darey barta Google Video, waxay sameysaa raadinta noocyo kala duwan oo tags ah oo ka socda Google Video. Waxaad ka heli doontaa kuwa aan ugu jeclahay halkaas - Seth Godin iyo Tom Peters, iyo sidoo kale kuwa kale